Tang Jun Automobile Seven Abụọ Ọrụ Congress N'ịbụ merie - China Shandong Honglu
Mine ewu ígwè
Dizel iga ụgbọala
Ngwuputa wetara ndị mmadụ ụgbọala
Ngwuputa iwu ụgbọ
Ngwuputa wheel Loader
New ike iga ụgbọala
Ndị ọzọ pụrụ iche na nzube ugbo ala
Dizel iga ugbo ala
mmanụ tank gwongworo
Tang Jun Automobile Seven Abụọ Ọrụ Congress N'ịbụ merie
Na January 3rd, anyanwụ na-egbuke egbuke na-ekpo ọkụ dị ka mmiri. The asaa nnọkọ nke abụọ mkpara nzuko nke ụlọ ọrụ ẹkenịmde ke ogbako ụlọ nke asaa ụlọ ahụ, onyeisi oche Xue Xingzhen, n'ozuzu manager Zhang Yanhong, osote onye general manager Wu Dengxi, Si Tao, Gao Yongguang, onyeisi oche nke ụlọ ọrụ ahịa Union na osote general manager Zhang Jialin. Zhang Jialin, bụ osote onyeisi oche na n'ozuzu njikwa nke ụlọ ọrụ, bụ onyeisi oche nke nzute. 63 mkpara nnọchiteanya na 42 attendee nnọchiteanya gara nzukọ. Ndị bịara mgbakọ chikọta-atụle mkpa ihe, na-egosi ebube ntụziaka Tang Jun si na-asụ ụzọ na uchu spirit.
8:00 nke ụtụtụ, na ogbako malitere solemnly na ebube song nke Tang Jun. The bịara gee ntị ma na-atụle "na nkwupụta nke nkwadebe nke ụlọ ọrụ mbara atụmatụ ke 2018" by osote general njikwa nke ụlọ ọrụ, Wu Jianke , Minister nke nchịkwa mmadụ management, "na idegharị arụmọrụ ntule usoro 2018" na "okwu na-ahụ na ego plan nke ụlọ ọrụ na 2018" site Li Xianguo, Minista ego. Ọrụ akụkọ.
Ná nzukọ ahụ, onyeisi oche nke ụlọ ọrụ, Xue Xingzhen, chọrọ ụlọ ọrụ iwu nke 2018, "onwe nnyocha na nkwanyerịta nnyocha na mmejuputa iwu, ndị niile so ghọta dabere, belata oriri na ijide oke, inupụ ọhụrụ net-jidere ndị ahịa ", na akọwa n'uju ụlọ ọrụ iwu ihe mgbaru ọsọ na zuru ezu. Na 2018, o kwuru na ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ iwu na 2018 bụ mma ngwaahịa dị ka isi akara, na-ebu ibe nnyocha usoro nke onwe nnyocha, jide dabere mmepụta, na-ebu arụmọrụ nke oriri Mbelata, nọgidere ewebata ọhụrụ na ngwaahịa na ahịa, na-edu ndú na ọkara nzọụkwụ jide ahịa.
Na 2018, nrụgide nke ahịa aku ka nnukwu na ahịa iwu bụ ndị ọzọ ufiop. Xue mgbe niile na-akpọku niile nnọchiteanya ifịk ifịk-ẹkedori ma na-edu ndị na-arụ ọrụ na-ọzọ saa mbara, na-ebu ụlọ ọrụ iwu mma, na-arụ ọrụ ike na creatively inye full play na talent na talent niile mkpara na-arụ ọrụ, ka n'ụzọ zuru ezu na-aghọta na iwu nke 2018 ụlọ ọrụ. Mark.
Post oge: Apr-21-2018
No.1 meishan ụzọ, zichuan mmepe, zibo Shandong China